Yakanyanya inozorodza yezhizha yakatevedzana inopihwa nemapuratifomu | Bezzia
Yakanyanya inozorodza yezhizha yakatevedzana inopihwa nemapuratifomu
Susana godoy | 21/06/2022 14:00 | Nhau
Isu tinogara tichida zhizha dzakateedzana kana mwaka uno wasvika. Sezvo isu tichida kunyura mumwaka weKisimusi pakupera kwegore, ikozvino tinoshandura zvese kune idzo nzvimbo dzeparadhiso, iwo mabhichi akakura uye nemamiriro ekunze akanaka. Nekudaro, kana iwe usati wava nezororo, unogona kufarira kunakidzwa nedzimwe nzira dzaunopihwa nemapuratifomu.
Sezvo ivo vakakwana kurodza havi yako zororo rezhizha rinotevera rava pedyo. Iyo yezhizha yakatevedzana yatakawana ine zvirongwa zvinokubata iwe kana iwe uchida kunakidzwa nemhando dzakasiyana dzemadingindira. Saka, inguva yekubheja pane yega yega yatinotaura pazasi.
1 chirimo chandakadanana nacho
3 dambudziko rezhizha
4 Mwaka wezhizha
chirimo chandakadanana nacho
Imwe yenhevedzano iri kunyanyotaurwa nezvayo ndeye iyi. Nokuti 'Zhizha randakadanana nayo' ndeimwe yenyaya dzevechidiki dzinogara dzichibatana. Iko kuchinjirwa kwemabhuku aJenny Han uye mune ino nyaya tinogona kunakidzwa nemusoro senge rudo rwekutanga asiwo hukama pakati paamai nevana pamwe nekufamba kwemwaka wezhizha uye zvese zvinongedzo zvainotisiya kuti zviite zvakanakisa. . Chokwadika, kana tikanyanya kunangidzira ngwariro panharo yake, zvinofanira kutaurwa kuti ikona nhatu dzorudo dzinoumbwa nomukadzi muduku navakoma vaviri. Iwe watove nayo iripo paAmazon Prime uye hongu, ndiyo imwe yezvakanakisa zvinopihwa kutanga kurarama kubva zvino.
Pakati pemwaka wezhizha tinowanawo madziva kuti akwanise kutonhora sezvatinofanira. Zvakare tinofanira kutaura izvozvo Iwe uchaiwana paAmazon Prime uye mune iyi kesi inosetsa, nezvitsauko zvipfupi zvinoonekwa nokukurumidza. Tinokuisa mupfungwa: Inyaya yemurume akagara kunze kwenyika kwenguva yakareba, kusvika rimwe zuva afunga kudzokera kuCanada kuti anoonana nemwanasikana wake waakasiya kuti arerwe. Asi anoziva kuti hazvisi zvinhu zvose zvichange zvakanaka sezvaitarisirwa, sezvo paine nhaka isingazoiti sezvaitarisirwa. Zvino iwe uchafanirwa kuiona yakazara kuti ukwanise kuziva kuti inopera sei.
Iri nhevedzano yezvikamu gumi uye kana iwe uchida kusefa, saka haugone kupotsa. Kwaive kutanga kwaChikumi apo 'Zhizha Dambudziko' rakamhara paNetflix. Mariri unogona kunakidzwa nemamiriro eAustralia uye hongu, mahombekombe ayo. Pasina kukanganwa kuti takatarisanawo nedhirama revechidiki sezvo protagonist waro ari Zhizha. Mumwe mukadzi wechidiki anopanduka anodzingwa pachikoro chake chesekondari muNew York. Nokudaro amai vake vanomuendesa kutaundi duku. Tinogona kugara tichimupa mukana wekuona kuti nyaya iyi yese inopera sei, hamufunge?
Zvekare isu tinogara paNetflix kuti tinakirwe nemamwe akatevedzana. Sezvatinoona, musoro waro unotiudza zvakawanda kupfuura zvatingatarisira. Mamiriro okunze akanaka uye basa rezhizha rinoita kuti boka revaduku vazivane. Iwo mana akasiyana zvakanyanya asi akabatana nekuda kwenzvimbo yeumbozha uye paradhiso yechitsuwa. Saka, iwo akakwana ekumisikidza kuti aenderere mberi achibhejera pane imwe yenhevedzano inozozorodza mwaka uno. Parizvino ine zvikamu zve8 uye mwaka mumwe chete. Asi zvakakwana kuti vakwanise kuwana zvese zvakavanzika zvavanovanza uyezve nekuuya kwerudo. Cocktail inoenda kure uye yausingakwanise kupotsa. Ndedzipi dzakateedzana dzezhizha dzawaona?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Yakanyanya inozorodza yezhizha yakatevedzana inopihwa nemapuratifomu
Yakasimba glutes kutarisira musana wako
Chenesa air conditioner kudzivirira kunhuwa kwakaipa